jeudi, 19 mars 2020 07:38
Fanararaotana mampakatra ny vidin'entana: Toeram-pivarotana PPN miisa telo nakatona
Nidina tampoka nijery ifotony ireo vidin’entana teny an-tsena ny Minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana, Minisitry ny filaminam-bahoaka ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena manoloana ireo mpivarotra sasantsasany manararaotra mampiakatra ny vidin’entana. Tao Anosibe dia magazay iray no voatery nakatona noho ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny taratasim-barotra; kamiao roa ihany koa no naiditra ambalam-pamonjàna noho ny fanaovana varotra antsokosoko tsy nahazoana alalana. Tao Namontana dia magazay miisa roa no nakatona noho ny tsy fisian'ny faktiora nihandohan'ny entana sy vidin'entana.
Niaiky ny fiverenan’ny fako miangona eto an-drenivohitra ny Ben’ny tanàna, Naina Andriantsitohaina. Tranga izay nampitaraina ny mponina. Nahita maso mivantana ny zava-misy ny tenany rehefa nidina nijery tamin’ny toerana samihafa. Raha ny fanazavany dia « nisy fahatarana kely ny SAMVA tamin’ny fandraofana fako noho ny olana ara-teknika samihafa ». « Noraisina ny fepetra », hoy i Naina Andriantsitohaina ary « efa manenjika ny fandraofana ny fako ny tompon’andraikitra ankehitriny ». Nambaran’ny Ben’ny tanàna ihany koa fa haverina indray, afaka andro vitsivitsy, ny Asa tanamaro (HIMO) izay hanampy amin’ny fanadiovana ny tanàna sy hanome asa ny mponina. (Jereo Sary Tohiny)
Mamerina ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy fa mbola manankery ny Naoty lah. 01/19/MEDD/Mi tamin’ny 29 janoary 2019, milaza fa voarara ny fitrandrahana ny hazo sarobidy sokajy faharoa dia ny hazomainty (bois d’ébène), ny andramena na bois de rose, ary ny voamboana manerana an'i Madagasikara. Voarara araka izany ny fanapahana, ny famarotana, ny fitaterana ary ny fanondranana ireo hazo ireo. Nankatoa ny fifanarahana iraisam-pirenena mifehy ny varotra iraisam-pirenena momba ny zavamananaina ahiana ho lany tamingana (CITES) i Madagasikara ka ho fanajana izany fifanarahana izany, sy ho fitandrovana ireo zavamananaina ahiana ho lany tamingana no nandraisana ny fepetra sy androsoana vahaolana hafa, ho fanatsarana ny fiveloman’ny mponina, hoy ny avy eo anivon’ny ministera. Mahakasika ireo hazo tsotra dia miato aloha ny fitrandrahana azy ireo araka ny Naoty fampahafantarana navoakan’ny Minisitera, ary mbola manan-kery hatramin’izao. Miato ny fanomezan-dàlana hanapaka hazo, mba hiarovana ny ala tsy ho ripaka sy ho fitandroana ireo ala sisa tavela.
Namory ireo sojaben’ny sampam-pianarana momba ny fitsaboana manerana ny oniversite enina eto Madagasikara i Pr Assoumacou Elia Béatrice, minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika, ny 16 martsa 2020, nandinihana ireo fepetra rehetra tokony horaisina manoloana ny fihanaky ny virus COVID-19 manerantany. Amin’ny maha siantifika azy ireo dia manana andraikitra amin’ny fanomezana fampiofanana amin’ny tokony hatao hisorohana ny aretina, sy fampitana vaovao marina mahakasika io aretina io izy ireo. Ny fananana ireo sampam-pianarana momba ny fitsaboana miisa enina manerana an’i Madagasikara dia efa zava-dehibe sahady ahafahana manampy ny vahoaka Malagasy, indrindra ny eny anivon’ny anjerimanontolo amin’ny fiatrehana sy fisorohana ny Coronavirus. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 17 mars 2020 15:29
Fanafihana « Cash Point »: Telo nidoboka eny Tsiafahy, vehivavy iray eny Antanimora
Olona efatra, ka vehivavy ny iray, no efa voasambotry ny Polisy, izy ireo izay voarohirohy tamin’ny fanafihana mitam-piadiana nitranga teny Ilanivato Anosipatrana-Antananarivo, ka nahafaty lehilahy iray mpanao « cach-point » sy nahaverezana vola aman-tapitrisa. Natolotra ny Fampanoavana eo anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo izy ireo omaly taorian’ny famotorana nataon’ny Polisy. Nalefa eny Tsiafahy ny telo lahy, izay mpitazona « cach-point » ny iray, mpitsikombakomba iray, ary isany mpanatanteraka fanafihana ny fahatelo. Nalefa eny Antanimora kosa ilay vehivavy, izay mpitana ny fitaovam-piadiana sy mpanafina ireto olon-dratsy, izay vadin’ny iray amin’ireo jiolahy. Mbola misy naman’izy ireo karohina amin’izao fotoana izao. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 17 mars 2020 09:36
Coronavirus: Sahirana ireo firenena federaly
Allemagne, Etat-Unis, anisan'ny sahirana amin'ny fametrahana fepetra iombonana. Raha manana tombony lehibe ireo firenena federaly amin'ny fampandrosoana ny faritra, amin'ny fandraisana andraikitra isan'ambaratonga, dia hita mavesatra ary tara ny fanapahan-kevitra, satria dia tsy miaraka, ary tsy mitovy ireo fepetra isaky ny faritra na Etat ao anatin'ireo firenena federaly. Mbola maka ny faneken'ireo governora na ireo lehiben'ny faritra. Raha ny any Allemagne dia ny dokotera any ambanivohitra aza no manana lanja ny fanapahan-keviny noho ny minisitry ny fahasalamana federaly, ny fanakatonana ny fampianarana dia tsy afaka idiran'ny fanjakana federaly. Mikatona kosa ny sisitanin'ny Allemagne amin'ny Frantsa, Suisse ary Autriche. Any Etat-Unis dia nanentana fotsiny ny filoha Donald Trump ny tsy hivorivoriana mihoatran'ny olona 10, ny tsy fivezivezena raha tsy dia misy antony manokana, tsy fandehanana amin'ny bar sy toeram-pisakafoana. Nilaza moa izy fa natao fitiliana ary tsy misy soritraretina.
Nanao fanambarana ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa anaty tany miady izao Lafrantsa, dia mikatona manomboka ny talata amin'ny 12ora atoandro ny espace Schengen, na ny faritra eoropeanina, mandritra ny 30 andro. Ny fifandraisan'ny samy Eoropeanina dia mitsahatra ihany koa. Raha momba an'ny Frantsa manokana, dia mijanona any an-trano avokoa ireo rehetra tsy voatery andeha amonjy ny toeram-piasana. Ezahina ny asa any an-trano. Tsy azo atao ny fivoriana rehetra. Izany mandritra ny 15 andro. Nanokana vola 300 miliara euro ny fanjakana frantsay atao antoka amin'ny trosan'ny orinasa. Arovana ny orinasa frantsay, mba tsy hisy orinasa ho fatin'ny krizy, hofatrano, vidin-drano sy jiro, karaman'ny mpiasa, ahantona aloha ny fandoavana ireo trosa.
Sary: ‎Eddie Mahitsison
Toeram-pivarotana iray sady misy fanamboarana moto no nirehitra teto Agnaboandrefa Fokontany Ampanefena Avaratra, Distrikan’i Vohémar omaly, tokony ho tamin’ny 4ora tolakandro. Fifampikasohan’ny tariby nitondra herinaratra no tombanana ho niandohan’ny afo. May tao ny lelavola 10 tapitrisa Ariary, miaraka amin’ny entam-barotra sy moto iray. Mahatratra 100 tapitrisa ariary ny tomban'ireo vola sy entana may. Tsy misy ny aina nafoy, fa lehilahy iray no naratra ary efa tsaboina ao amin’ny CSB II Ampanefena. (Jereo Sary Tohiny)
Naiditra am-ponja vonjimaika ny 5 amin'ireo 11 voarohirohy tamin'ny raharaha fanodinkodinana hazan-dranomasina efa nogiazana. Ny andron'ny 06 martsa 2020 no tra-tehaky ny Zandary avy ao amin'ny Tobin-janamparitry ny Zandarimariam-pirenena ao Ambohimiadana, teny Ampanotokana (RN4), ny fiara Sprinter iray nitondra dingadingana (concombre de mer) tsy ara-dalàna, efa nohamainina miisa 66 gony. Entana tsy ara-dalàna efa nogiazana tany Maromandia, Distrika Analalava Faritra Sofia izy ireo, saingy nahodinkodin'ireo tomponandraikitry ny fanaraha-mason'ny Jono tany an-toerana.
Fotoam-bavaka no natao ary tamin'ny ora firavana dia mbola nijanona isan’ireo nanisa rakitra ny tompon’ilay moto. Rehefa nivoaka ny fiangonana ity farany dia akory ny hatairana fa nanjavona ilay moto Honda 125 miloko mena. Vao nandre ny zava-nitranga dia nifanome tanana avy hatrany ny tanoran’ny fiangonana hikaroka. « Nisy tovolahy hitanay nanosika izay moto izay teo fa heverinay ho nirahina hanakisaka azy ka tsy nisy nanampo », hoy ny nahita. Raikitra ny tsongo-dia, natao ny fikarohana ka hita tao Ambatofitatra Ambany eto Sambava ilay tovolahy nisy nahita fa nanosika ilay moto, ary efa teo ampandravana azy izy no tra-tehaky ny mpiara-miangona ...ka tsy nahateny. Noraisina avy hatrany ary nentina niverina tany am-piangonana ilay tovolahy manodidina eo amin'ny 15 taona. Efa naverina amin'ny tompony ny moto.